Abdirahman A. Warsame “Farmaajo waxaa ka go’an in uu hor istaago wadda kasta oo lagu gaari karo doorasho wadar-oggol ah” – Kalfadhi
Abdirahman A. Warsame “Farmaajo waxaa ka go’an in uu hor istaago wadda kasta oo lagu gaari karo doorasho wadar-oggol ah”
March 27, 2021 Hassan Istiila
Farmaajo waxaa ka go’an in uu hor istaago wadda kasta oo lagu gaari karo doorasho wadar-oggol ah oo si nabad ah ku dhacda. Wuxuu doonayaa in Golaha Shacabka oo muddo xileedkiisii dhammaaday, Aqalkii Sare na ka maqan yahay uu muddo kordhin sharci dari ah u sameeyo. Wuxuu kaloo ogyahay in Dowlad Goboleedyada, mucaaradka iyo Beesha Caalamka aysan aqabali doonin.
Laakiin wuxuu rabaa in uu is qarxis siyaasadeed sameeyo, inta la jaalka ahna labo far u taago, I taageera oo isla kay qarxiya ama i diida oo Dowlad Goboleedyada iga soo horjeeda, Aqalka sare, mucaaradka iyo ajnabiga raaca oo na kala wada.
Maanta imtixaanka ugu adag waxaa wajahaya Farmaajo saaxiibbadiis oo ay hortaallo kala doorasho ah in in ay Farmaajo isla miidaamiyaan, ama ay gacanta qabtaan oo isaga, iyaga iyo dalkaba badbaadiyaan oo ay doorasho loo dhanyahay oo si nabad ah ku dhacda ogolaysiiyaan.
Waxaa mahadsan mudanayaasha ka tirsan Gola Shacabka ee sii caddeeyay mowqifkooda iyo inta diidan damaca Farmaajo.
W/Q Abdirahman Abdi Shakur Warsame
Rayiga iyo qoraalkan wuxuu gaar u yahay qoraaga.
Kulankii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo maanta u baaqday kooram la’aan iyo buuq
Guddoomiye Mursal oo shan kulan ka ganaaxay 15 Xildhibaan (Akhriso Magacyada)
Wasiir Dubbe oo qormo kusoo kooban wixii uu kusoo arkay magaalada Jowhar
June 9, 2021 Hassan Istiila
Khamisitii la’ soo dhaafay waxan kamid ahaa wefdi culus oo uu hoggaaminayey Raisal Wasaaraha Xukuumadda JFS...
30 Sanno iyo Soomaaliland W/Q Barkhad Jaamac Batuun
Qoyskaygu waxa uu ka mid ahaa qoysas guryaha ay galaan ahaayeen Xafiiska Hay’adda shaqaalaha. Waqtigaas Abdullahi...
5- Qodob oo soo dedejisay guuldarada madaxweyne farmaajo:
May 9, 2021 Hassan Istiila
1- In uu ku dhiiraday muddo kororsi 2sano ah oo ay sii shaaciyeen mucaaradka ka hor...